Washington oo qarka u saaran jebinta heshiiskii Nuclearka iiraan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Washington oo qarka u saaran jebinta heshiiskii Nuclearka iiraan
Washington oo qarka u saaran jebinta heshiiskii Nuclearka iiraan
Mareykanka(SONNA) Donald Jey Trump Madaxweynaha Wadanka Mareykanka ayaa u muuqda in uu soo afjarayo heshiisyadii dhanka hubka Nuclearka oo horey loola galay Dalka Iiraan, Mr Trump ayaa dib ugu celin doono aqalka Congareeska si cunaqabateyn cusub loo saaro Iran.
Go,aankan ayaa la sheegay inuusan gabi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015-ka, balse taasi badalkeeda loo wareejin doono Kongareeska oo muddo 60 cisha gudahood go,aan uga gaari doono in Iran la saro cunaqabteyn cusub.
Sidoo kale Burinta heshiiskan ayaa albaab u fureysa wadahadalo cusub oo ku saabsan heshiiska niyukleerka Iran, hase yeeshee madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay in aysan wadahadal ka geli doonin arrintani.
Madaxweyne Trump oo ka hadlayay kulan gaar ah oo uu Aqalka Cad kula yeeshey saraakiisha milateriga ayuu sheegay inay qasab tahay inay soo afjaraan hanka nukliyeerka ee Iiraan, iyo sidoo kale waxa uu ugu yeeray daandaansigeeda Bariga Dhexe.
Previous article(AKHRISO) Dowladdaha Soomaaliya iyo Suudaan oo gaaray Heshiis is afgarad
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo kormeerey Warshad lagu daabacayo lacag Shillin Soomaali ah+Sawirro